“Cidhif Gees ka Gees Cawke-yare Waa Laga Yiqiin, Carriga Soomaale” |
Marka uu warka sheegayo, waxa la odhan jiray war muhiim ah ayaa jira, mar haddii Cawke sheegayo warka. Waxa laga yaabaa, in aanuu warkuba muhiim ahayn
Sweden(GNN):-Shalay subaxnimadii hore, anigoo shaqada jooga, oo markaa uun soo galay 6:30 ayaan yara jalleecay qoraal ku qornaa Facebuugga, oo sheegaya geerida Axmed Xasan Cawke, oo ku geeriyooday magaalaga Jigjiga. Wax yar ka dib, qoraallo aad u badan oo tacsida xanbaarsan ayaa sida daadka meel kasta aan ka halacsaday. Maalin kasta waa la geeriyoodaa, ee maxaa kala jaad ah. Inta badan, qofka dad badan ay garanayaan, maqalka iyo hadal hayntu waa ay ka badataa qofka aan dad badani garanayn. Ilaahay ha u naxariisto, Axmed Xasan Cawke, oo xalay xilli danbe ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee Ismaamulka Soomalida Itoobiya.
Axmed waxa uu ahaa
weriye caan ah. Waxa aan odhan karaa, waxa uu ahaa weriyihii ugu caansanaa ee soomaalida soo mara. Waxa uu gaadhay magaciisu in loo bixiyo qof kasta oo codkarnimo lagu astaynayo. Waxa aan xasuustaa sannadihii 1983kii ilaa 1985kii oo aan ku jiray dugsiga sare ee 15 Mey oo ku yaallay magaalada Muqdisho, waxa ardayda ka mid ahaa, wiil lagu naanaysi jiray CODKA. Naanaystaasi waxa ay ka soo jeedday CODKA CAWKE, oo marka la soo gaabiyona noqonaysa Codka. Magacaas ayaa uu inankaasi ku magacdheeraa. Waxa kaloo aan garanayaa, Axmed Abokor Maxamed oo ku magacdheer Cawke.